Talata 07 Septambra 2021 – FJKM
Talata 07 Septambra 2021
ASAN’NY APOSTOLY 2.37-39
Ny Mampiavaka ny fanompoan’ny Apostoly
1-Ny toriteniny manasongadina an’i Jesoa Kristy
Tsy mitsitsy fitenenana ny Apostoly raha nanambara fa ireo olona mifanatrika aminy ireo mihitsy ilay nanombo an’i Jesoa tamin’ny hazo fijaliana . Nahatsiaro tena ireo mpihaino ka voatsindtona tampony (and37).
2-Ny toriteniny mitaona olona hibebaka
Rehefa nanontany tena ny olona : »ry rahalahy , inona no hataonay ? » Dia mazava ny valiteny nomena azy ireo : « mibebaha » . Notaomin’i Petera ny olona hiova famindra, hiala amin’ny ratsy fanaony, ho tonga olom-baovao.
3-Ny fanentanana ny olona handray sakramenta
« Aoka hatao batisa amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy ianareo rehetra« . Iray amin’ireo sakramenta tokony horaisin’ny vahoakan’Andriamanitra ny batisa. Manana adidy hanentana ny olona hiroso amin’izany isika mpitory.
4-Fitarihana ny olona handray famelan-keloka
« …mba hahazo famelana ny helokareo »(and38) . Ankoatry ny ny fifantohana amin’ny toriteny, ny fibebahana dia sitraky ny apostolyny hisitrahan’ny olona famelankeloka avy amin’ny Tompo .
5-Fampianarana momba ny Fanahy Masina
Mandini-tena noho ny fihainoana toriteny , mibebaka, mandray famelankeloka, misitraka ny Fanahy Masina .Izany no fanompoana hitarihan’ny Apostoly ny olona .
6-Fanehoana ny fitiavan’nyTompo ho an’ny rehetra
Ho an’ny rehetra ny teny fikasana . Tsy manavaka na iza na iza ny Tompo . Miantso ny rehetra hanatona Azy (and39)
Inona avy no mampiavaka ny fanompoan’nyApostoly ?